Nokho, ubani phakathi kwethu ayithandi hang kwenye ukuxhumana nomphakathi futhi abe isiphuzo at itiye uziphumulele, ikhofi, ubhiya noma iwayini? Ezimweni lapho ukuthuthumela wethu esandleni uwisa isiphuzo ikhibhodi noma igundane, akukhona okungavamile ukuba likhithike. Abanikazi PC lena akuyona inkinga - vele uye esitolo electronics kanye ukuthenga brand kudivayisi elisha elalizothatha indawo eyodwa ichithekile. Kodwa kuthiwani uma ungenayo ekwi-desktop yekhompuyutha, i-laptop noma netbook? Lokhu kumenyezelwe namuhla futhi kuzoxoxwa.
Indlela ukuqaqa ikhibhodi kusuka laptop: musa ukuchitha isikhathi sakho esiyigugu
Vele ufuna ukuxwayisa zonke yalabo abanhliziyo ikhibhodi wahlupheka amashwa ukuba iziphuzo egcwele noma ugcwale imvuthu kanye nezinye udoti, okuba nomthelela omubi ukusebenza kule divayisi. Musa ukuchitha isikhathi sakho ngeze. Uma uqhubeka ningenzi, kancane kuzodingeka ithuba lokulondoloza umngane wakhe noutbuchnogo. Emva niphuza elichithwe okhiye okungenani ayizintandokazi, ngokushesha uqaqe laptop ngokususa ibhethri bese ingaxhunyiwe kunethiwekhi. Linda izinsuku ezimbalwa (mhlawumbe, eyomile kakhulu) akufanele kube - Ungaqala oxidative izinqubo, umphumela okuzoba engelapheki. Futhi ikakhulukazi hhayi kunomvuzo Ngemva kwalesi sehlakalo usebenzisa laptop - amathuba ukuthi okusamanzi okungaphathwa singene chips ngeke avuse short circuit, izwe libanzi inxa zombili. Ngokushesha bethwele "wagula" EVMku enkonzweni, noma ungazama ukuqaqa laptop ikhibhodi ngokwakho usebenzisa izincomo zethu. Futhi yebo, ungase futhi ukuthenga Claudia entsha notebook sika, ezokwenza abiza emhlabeni 1500-3000 ruble.
Indlela ukuqaqa ikhibhodi kusuka laptop: inhlolovo eyinhloko "nesineke"
Bheka ikhibhodi abampofu bese uzama ukuhlola umonakalo. Akunandaba ukuthi uketshezi futhi kungakanani eliye lachithwa phezu ikhibhodi. Kungakhathaliseki ukuthi noma wanamathela wazibonakalisa block izinkinobho noma okhiye ambalwa, une ukuqaqa konke. Lo msebenzi ngokucophelela kakhulu, ukuze bathathe isikhathi sakho futhi, yebo, ukubekezela. By the way, sifuna ukuxwayisa ukuthi godu inqubo esiyinhloko siyoba ngisho umsebenzi onzima ngaphezulu. Ngaphambi Claudia ukuqaqa, qiniseka ukuthatha isithombe ke (ngisho noma ungaphrinta umbhalo "abayizimpumputhe" indlela, kusenzima kuwufanele ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe).
Indlela ukuqaqa ikhibhodi kusuka laptop: ezicashile eziyisisekelo disassembly
1. Okokuqala, bheka ukuthi iluphi uhlangothi kungcono snaps okhiye. Ngo onobuhle ezahlukene notebook yasibamba indlela ihlukile - lapho isihluthulelo kalula ngaphandle lapho futhi uthathe isinyathelo. Qaphela ukuthi iyiphi yokhiye ohlangothini obandayo (kwesokudla noma kwesobunxele) kanye mpo (phezulu noma phansi). Udinga ukwenza ohlangothini mpo uqaphele - mshini nokugcinwa kalula zephuke izama ukususa kuyo noma ngokusebenzisa ukunyakaza eqinile futhi kungazelelwe.
2. Ukuze sikusize ephelele kufanelekile esebenzisa esihle futhi enze uphenyo yamazinyo, kahle, noma ezinye ezifanayo "anatomy" amathuluzi ayo.
Indlela ukuqaqa ikhibhodi kusuka laptop: izinyathelo Ukudilizwa
3. Ukudilizwa uqale nge izinkinobho ne izinombolo kanye namagama - bangabaphingi bonke okufanayo square ukuma okunamathiselwe izindlela bona ayafana yini.
4. Susa ukhiye bawubeka eceleni, kanye indlela yabo (ophakamisa), njengoba kungase kwenzeke olufanele izinkinobho ngabanye.
5. Manje uqhubekele Ukudilizwa irowu engenhla okhiye ( "E», «F-ki», «Esc» njll). Mechanism bagubha ezahlukene kancane, kodwa futhi yakhiwa izingcezu abamhlophe nabansundu.
6. Feza Ukudilizwa izinkinobho ezinkulu, indlela okuyinto efana lo mshini okhiye ukuthi Ususe kakade. Okulandelayo uqhubekele inkinobho isikhala lapho agcinwe esebenzisa ezimbili ophakamisa. Manje ukususa asele «Alt», «Ctrl», «Win», «FN».
7. Ngemva kokususa zonke izinkinobho, susa black iraba trafaretki izinkinobho (ngokuqinisekile, futhi unalo igama ezinye ngokwesayensi). Ukuze wenze lokhu, ususe ifilimu emithathu ungqimba isisekelo.
8. Ukuhlukanisa Phakathi izingqimba ezintathu kusuka nomunye (Ungakhohlwa lapho ikhibhodi uzoqoqa ngemva wokuhlanza, izingqimba abangu kalula uphinde uxhume nomunye).
9. Sula yonke izingqimba ngendwangu emanzi, futhi qiniseka ukuze ome ngaphambi kokufaka ikhibhodi.
Awu, wena wafunda indlela ukuqaqa laptop ikhibhodi. Kuhlala kunjalo amancane - ukuphinda inqubo ngenhla oda reverse. Ngikufisela inhlahla!
Kanjani ukuqeda freckles. Izindlela eziyinhloko
Ungalondoloza kanjani izixhumanisi kusuka ku-indexing?
Entoni Dzhoshua: kwezemidlalo